မောင်ရစ် – အပြောင်းအလဲအတွက် မေတ္တာ၊ အိမ်သာနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
အခုဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်၊ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန်၊ မြန်မာပြည်အရေးအခင်းများ လှိုင်းကြီးလေထန်ဖြစ်နေစဉ် မြန်မာပြည်က ပြည်ပကို ခေတ္တကြွလာတဲ့ ဆရာတော်တပါးနဲ့ စကားလက်ဆုံ ပြောဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြတာပါ။ အဲသည်တုန်းက မြန်မာပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲကို အားလုံးက အပြင်းအထန်တောင့်တပြီး ရုန်းကန်နေကြချိန်၊ မြန်မာပြည်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံနေရချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ဖြင့် အချိန်အခါ အခြေအနေတွေဟာ ‘ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ’ လို့ ဆိုကြရတော့မယ် အခါ ဖြစ်နေပါပြီ။ အခု အဲသည်တုန်းက အကြပ်အတည်းကာလကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အစကတော့ မြန်မာပြည်က ခေတ္တလာရောက်တဲ့ ဆရာတော်တပါးက စာအုပ်စာတမ်းတချို့ ဖတ်ချင်တာတွေရှိလို့ ရှာဖွေပေးမိတာပါ။ ပြီးတော့ ဆရာတော်နဲ့ စကားစမြည် ပြောဆို တင်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ရစ်က စကားလည်း ၄ လုံးကွဲအောင် မပြောတတ်၊ (ဒီ မို က ရေ စီ … ဟိုက် … ၅ လုံး ဖြစ်သွားပြီ)။ စာလည်း တည့်တည့် ဖြောင့်ဖြောင့် မရေးတတ်ပါဘူး။ (ဒီကောင်က စောင်းပြီးပြောတယ် တဲ့၊ လက်ရေးမလှဘူးလို့ ဆိုတာနဲ့တူရဲ့)။ ဆရာတော်ကို အင်တာဗျူးဖို့ မစဉ်းစားရဲပါ။ နောက်တော့လည်း မေးဖြစ်တာလေးတွေကို ဆရာတော်က စေတနာ မေတ္တာထားပြီး ဖြေခဲ့တော့ အဲသည်အကြောင်းတော့ ရေးဦးမှပဲဆိုပြီး ရေးပါတယ်။
ဘုရားရှင် လက်ထက်မှာ သာဝကတွေ၊ သံဃာတော်တွေဟာ အဲသည်လို ကျင့်ကြံကြပါ သတဲ့။ ရဟန်းအချင်းချင်း မျက်မှောက်ကော၊ မျက်ကွယ်မှာပါ မေတ္တာထား စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ကြပါသတဲ့။ တစုံတဦးက ပြစ်တင်စကား ဆိုလာလျှင်၊ မကောင်းကြံစည်လာလျှင် သံဃာတို့က စိတ်ကို သန့်ရှင်း တည်ငြိမ်စွာနဲ့ မေတ္တာထားပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြပါသတဲ့။ အဲသည်တော့ သံဃာဆိုတာ သာမဂ္ဂီ ဆိုတဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်သော အစုအဝေးဖြစ် အဓွန့်ရှည်ပြီး သာသနာကို စောင့်ရှောက် ထွန်းကားစေပါ သတဲ့။ အဲသည်လို “သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ …” ဆိုပြီး ဒီလို သံဃာကောင်း သံဃာမြတ်တို့ စုဝေးပေါင်းဖက်ခြင်းကနေပြီးတော့ နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာအထိ ရရှိစေအောင် အကျိုးများနိုင်ပါသတဲ့ လို့ ဆရာတော်က ရှင်းပြပါတယ်။
အခုအချိန်အခါ – ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ဆိုတဲ့ ၂၀၁၆ မှာတော့ဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ တုန်းက ပြောခဲ့တာလးတွေ သတိတရနဲ့ ထုတ်ဖော် ရေးသားလိုက်ပါရတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ညီညွတ်လိုက်ကြတာကြောင့် (အချင်းချင်းလည်း မေတ္တာထား၊ အတင်းတွေ မပြော၊ မကွဲမပြဲ) တွန်းခဲ့ကြတာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်မှုဟာ သက်သေဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်သာပြီဆိုတော့ ဧည့်လာတာ … မိမိတို့ အင်အားက ချစ်ခင်နှစ်လိုသော အင်အားရှိလာတာမို့ တဖက်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အပြင်လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ၀ိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုလား တိမ်းညွတ်လာကြတာကလည်း အထင်အရှား မြင်တွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွေ့ ဒီအကူးအပြောင်းဟာ ပါရီမီရှင်ကဲ့သို့သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့ ဦးဆောင်မှုကြောင့် ခံစားရတဲ့ တမဟုတ်ခြင်း ထမြောက်မှုကြီး ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောချင်မိပါတော့တယ်။ ကဲ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီကနေ ပြောင်းလဲပြီ ဖြစ်စေဖို့ ဆက်လက် ချီတက်ကြပါဦးစို့။
2 Responses to မောင်ရစ် – အပြောင်းအလဲအတွက် မေတ္တာ၊ အိမ်သာနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း
Ko Zaw on March 7, 2016 at 9:09 am
Religious Teacher(s)’s talk –> Changed U Than Shwe- Daw Kyaing’s action. NLD win in 2015. Now, most Myanmar people weekly go to Temple and listen to monks for Unity of own family. Politic. unity under one clean person DASSK.
Religious People are the most clean person.
‘free thinkers’, i have no idea.
Catwoman on March 8, 2016 at 10:16 am
I respect gen aung san but not sure if we should stay under British rule for awhile. That might have been good for burma. We can be like Hong Kong but Burmese people are annoyingly patriotic . We got independence from the British and now look at where we are.